चिनियाँ रेलः एक कदम अगाडि - Everest Media News
Home राजनीति चिनियाँ रेलः एक कदम अगाडि
In: राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी ओली यसपाली चीनका लागि दुई वटा खुसीका खबर बोकेर बेइजिङ पुगेका थिए। पहिलो, एमाले र माओवादी एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन। पछिल्लो एक दशक एमाले र माओवादीसँग छुट्टाछुट्टै सम्बन्ध राख्ने क्रममा ‘दुई पार्टी मिले हुन्थ्यो’ भन्ने सुझाव दिँदै आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका महासचिव सी चिनफिङका लागि यो एउटा सुखद खबर थियो।
दोस्रो, नेपालमा लामो समयपछि गठन भएको दुई तिहाई बहुमतको सरकार, जसले आर्थिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमा स्थिर सरकार बनोस् र पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको वातावरण तयार होस् भन्ने चाहना राख्दै आएको चीनका लागि यो अर्को सकारात्मक पक्ष हुने नै भयो।
यही अवसरमा चीनका राष्ट्रपति सीले तिब्बतको सिगात्से आइपुगेको रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं जोड्ने घोषणा गरेका छन्, ओलीसँगको वार्तामा। ओलीको चीन भ्रमणको यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो, जुन सफल भयो भने उनको राजनीतिक जीवनकालको सबैभन्दा स्मरणयोग्य विषय बन्नेछ, दीर्घकालसम्म।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच मूलतः तीन वटा विषयमा प्रगती भएको छ।
१. राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको सुनिश्चितता।
२. केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा सहकार्य गर्ने सम्झौता।
३. व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलको अन्तिम तयारी।
यी तीन र अन्य विषयमा यसपाली भएको प्रगती ओलीले दुई वर्षअघि गरेको चीन भ्रमण र त्यसबेला भएका सम्झौता सहमतीसँग जोडिन्छ।
८ चैत २०७२ को साँझ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा एउटा विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। दक्षिण एशिया मामिला अध्ययन गर्ने बेइजिङका करिब दुई दर्जन चिनियाँ विज्ञसहित त्यहाँ झण्डै डेढ सयको जमात उत्सुकतासाथ कसैको प्रतिक्षामा थियो।
एकैछिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै उत्साहका साथ आफ्नो दलबलसहित दूताबासको हलभित्र छिरे। राजदूत महेश मास्केबाट माइक पाएपछि उनले निकै उत्त्साहित हुँदै भने, ‘हामीले बेइजिङमा उच्च नेताहरूसँग भेट्यौं, म धेरै उत्साहित छु, यो मेरा लागि सबैभन्दा खुसीको क्षण हो।’
आइफोनको नोट बक्समा सुरक्षित ओलीको यो भनाईले अहिले फेरि मलाई त्यो ऐतिहासिक भ्रमण ताजा गरायो।
ओली त्यसरी उत्साहित हुनुमा त्यसबेलाको भूराजनीतिक कारण पनि थियो। दुई वटा ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देशमाथि एउटा छिमेकीले राजनीतिक दबाब दिँदै आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। अनेक प्रयासपछि भारतले नाकाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको समयमा उनी नेपाल–चीनको साझेदारी रहेको हिमालय एयरलाइन्सको विमान लिएर बेइजिङ उत्रेका थिए, उत्तरको छिमेकीसँग सहयोगको हात बढाउन। र, त्यो दिन ग्रेटहलमा भएको भेटवार्तामा चीनका राष्ट्रपति सीबाट बलियो ढाडस पाएपछि उनी सिधै दूताबास आएका थिए, त्यही खुसी बाँड्न।
प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग ग्रेटहलमै प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता भैसकेको थियो। जहाँ नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन, अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, नेपालमा पेट्रोलियम खानी र पेट्रोलियम भण्डारण स्थल पहिचान गर्न चीनको सहयोगमा अध्ययन गर्ने लगायत १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र चीनले हिमालयपार रेलमार्गमा सहकार्य गर्ने कुरा कम्तिमा संयुक्त वक्तव्यमा राख्ने सहमती गरिसकेका थिए। राष्ट्रपति सीले २०१६ मै नेपाल भ्रमण गर्ने र त्यसबेला केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसहित केही ठूला आयोजनाका सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अन्तर्गत बेइजिङमा त्यो स्तरको सहमती बनेको थियो।
दुई वर्षअघि बेइजिङमा त्यो ऐतिहासिक सम्झौता–सहमती गर्दा ओली एउटा चुनौतीपूर्ण तर अनुकुल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए। दिल्लीको असहमतीका बाबजुद संविधान जारी भएपछि पुष्पकमल दाहाल र कमल थापाको साथमा उनले सत्ता सम्हालेका थिए। संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने दिल्लीको दबाब र नाकाबन्दी एकसाथ सामना गरेकोमा काठमाडौंको नेतृत्वमाथि नागरिक तहमा विश्वास बढिरहेको थियो। प्रतिकुल स्वास्थ्य अवस्थाकाबीच आएको अवसरलाई मुलुकको दीर्घकालीन हितमा रुपान्तरण गर्ने आकांक्षा देखिन्थ्यो ओलीमा।
नेपाल–चीन सम्झौताले ओलीलाई राजा महेन्द्रसँग तुलना हुने गरी ‘हिरो’ बनायो। दिल्लीले चाहिँ त्यो सम्झौतालाई ‘नेपाल हुँदै भारत पुग्ने चीनको रणनीतिमा काठमाडौंले सहमती जनाएको’ अर्थ लगायो र त्यसलाई ‘वेक अप कल’ का रुपमा लियो। बेइजिङबाट फर्केको चार महिनासम्म चीनसँग भएका सम्झौता–सहमती कार्यान्वयनमा लैजान पहल नगरेको आरोपकाबीच माओवादीको समर्थन गुमाएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए।
ओलीको राजिनामासँगै भूराजनीतिक परिस्थिति बदलिएको विश्लेषण बेइजिङमा हुन थाल्यो। काठमाडौंले बेइजिङसँग सम्बन्ध बढाएपछि दिल्लीको योजनामा ओली सरकार ढालिएको चीनका दक्षिण एशिया विज्ञको निष्कर्षमा सरकारी अधिकारी समेत सहमत हुँदै गए। ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको प्रयासका बाबजुद त्यसबेला सीको नेपाल भ्रमण त टर्यो नै, रेलमार्ग र व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकल जस्ता ठूला सम्झौताको तयारी पनि सुस्तायो।
ओली फेरि सरकारमा फर्किनेछन् भन्ने सायद धेरैलाई लागेको थिएन, त्यसबेला। तर उनी फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रष्ट मिसनका साथ निरन्तर अगाडि बढे, र आफ्नो भोट बढाउन भारतको नाकाबन्दी सामना गर्दै चीनसँग सम्झौता गर्दा बनेको राष्ट्रवादी छविको भरपुर प्रयोग गरे। आफ्नो मिसनमा अझै निश्चित हुन उनले दाहालसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको हात बढाए।
बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मिसनमा सफल भएपछि ओलीका अगाडि एउटै चुनौती थियो, दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने। त्यो आवश्यकता दिल्लीका लागि झन् बढी थियो। दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्ने लक्षसहित पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गरेका ओली बोआओ एशिया फोरममा सहभागी हुन चीनको हाइनान गएनन्, कोही प्रतिनिधि पनि पठाएनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौंमा अभिनन्दन गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा उनी फेरि भारततिर ढल्किँदै गएका हुन् कि भन्ने प्रश्न काठमाडौंदेखि बेइजिङसम्म नै उठ्न थालेको थियो।
ओलीको यो भ्रमणको ठोस उपलब्धीमध्ये पहिलो हो, चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको सुनिश्चितता। दुई वर्ष अघि बंगलादेश र त्यसअघि श्रीलंका भ्रमणलाई सम्झने हो भने सीको नेपाल भ्रमणले धेरै कुराको संकेत गर्छ।
तर सी केही महिनाभित्रै नेपाल आउने तयारीमा चाहिँ देखिँदैनन्। पहिलो कार्यकालमा धेरै विदेश भ्रमण गर्ने राष्ट्रपतिको दर्जा पाएका सीको यो वर्षको कार्यसूचीमा विदेश भ्रमण परेको छैन भन्ने चिनियाँ अधिकारीको भनाई यदि सही हो भने उनी २०१८ मा नेपाल आउने छैनन्। यदि उनी अर्को कुनै देशको भ्रमणमा गए भने नेपाल किन आएनन् भन्ने प्रश्न उठ्ला तर अहिलेसम्म सीले यो वर्ष त्यति विदेश भ्रमण गर्ने छैनन् भन्ने बुझाई बेइजिङमा छ। त्यसैले सीको नेपाल भ्रमण ८–१० महिनापछि मात्रै हुनसक्छ भनेर चिनियाँ अधिकारीले २०१९ को सुरुतिर उनी आउन सक्ने संकेत दिएका हुन्।
सन् १९९६ मा ज्याङ जमिन आएयता चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा प्रायः ठूला सम्झौता सहमती हुने भएकाले त्यो आफैंमा ठूलो सन्देश हो।
यसैपनि २२ वर्षपछि हुने चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण सामान्य हुनेछैन। कुनै बेला निकट भविष्यमा हुन सक्ने उच्च भ्रमणका लागि एजेण्डाहरू साँचेर राख्ने कुटनीतिक अभ्यास पनि छ। सबै तयारी भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरिएन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदाका लागि त्यो साँचेर राखियो।
अहिलेसम्मको संकेत हेर्दा सी नेपाल आउँदा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने सम्झौता हुन सक्नेछ। ‘पैसा हुनेले रेलमार्गमा लगानी गर्छ’ भनेर ओलीले त्यस्तै संकेत गर्न खोजेका छन् भने नेपालले लगानी गर्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै सीले रेलमार्ग नेपाल जोड्ने आश्वासन दिएका छन्।
ओलीको चीन भ्रमणको दोस्रो प्रगती हो, रेलमार्ग निर्माणमा सहकार्य गर्ने सम्झौता। बेइजिङको ग्रेटहलमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लीको उपस्थितिमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा नेपाल र चीनले सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ।
नेपाल र चीनबीच कम्तिमा एक दशकदेखि चिनियाँ रेलमार्ग नेपाल जोड्ने विषयमा छलफल र पछिल्ला केही वर्यायता विभिन्न तहमा अध्ययन भइरहेको थियो। यसपाली केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा सम्झौता मात्र होइन, यसको पूर्व संभाव्यता अध्ययन अर्को अढाई महिनाभित्रै पूरा गर्ने र लगानीको मोडालिटिमा छलफल अगाडि बढाउने सहमती भएको छ। लगानीको मोडालिटिबारे छलफल गर्न चीनको एउटा टोली चाँडै नेपाल आउँदैछ, लगत्तै नेपाली टोली बेइजिङ जाने कार्यक्रम बनेको छ।
बेइजिङमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्व संभाव्यता अध्ययन पनि गर्दै जाने सहमती भएको छ।
बेइजिङमा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीसँगको वार्तामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार सीले केरुङबाट रेलमार्ग काठमाडौं जोड्ने विषयलाई महत्वकासाथ उठाएका थिए। ‘तिब्बतलाई मुख्यभूमी चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने सपना ४० वर्षअघि नै माओले देखेका थिए, अब तिब्बतको सिगात्से पुगेको रेलमार्ग चाँडै केरुङ हुुँदै काठमाडौं पुग्ने विश्वास छ’, सीको भनाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएजस्तै यो सम्झौता यस क्षेत्रको भूराजनीति परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण पहल अवश्य हो। तर यसले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सुनिश्चित नै गरिसकेको छैन, रेलमार्गको संभावनालाई एक कदम अगाडि बढाएको छ। अर्थात् रेल गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा एक स्टेशन अघि बढेको छ।
ओलीको भ्रमणअघि र भ्रमणको क्रममा बेइजिङमा चिनियाँ अधिकारीसँग निरन्तर वार्तामा बसेका नेपाली अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ पक्षको सबैभन्दा ठूलो चासो लगानी नभएर प्राविधिक पक्षमा रहेको पाएका छन्। ‘केरुङबाट हिमाली भूभाग काटेर जुन उचाइबाट रेलमार्ग काठमाडौं ओराल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो तहको प्रविधि अहिलेसम्म चीनसँग पनि छैन’, चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो संसारकै एउटा कठिन रेलमार्ग हुनेछ। यति उचाइका पहाड चढेर वा पहाड छेडेर रेलमार्ग बनाएको अनुभव हामीसँग पनि छैन। तर त्यो प्रविधि विकास गर्न सकिन्छ, हामी गर्न सक्छौं।’
प्राविधिक अध्ययन र लगानीको विषय सुनिश्चित नभर्इ चीनका राष्ट्रपतिको मुखबाट नै रेलमार्ग जोड्ने प्रतिवद्धता आउन संभव छैन। सीले यसपाली रेलमार्गलाई महत्व दिनुको अर्थ हो, चीन प्रविधि र लगानीका हिसवाले पनि यो रेलमार्ग विस्तार गर्न तयार भैसकेको छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीनका लागि भूरणनीतिक र भूआर्थिक दृष्टिले जति महत्वपूर्ण मानिन्छ, संसारकै एउटा कठिन भूभागबाट रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रविधि विकासका हिसावले पनि यसले त्यत्तिकै महत्व राख्ने देखिएको छ।
ओलीको चीन भ्रमणको तेस्रो उपलब्धी हो, व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा विस्तृत छलफल र प्रोटोकल तयार गर्ने कार्यतालिका।
चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई नेपालमा तेस्रो देशबाट सामान भित्र्याउन भारतीय मार्गको एकाधिकार तोड्ने एउटा महत्वपूर्ण विकल्प मानिएको छ। दुई वर्षअघि यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसलाई यसपाली प्रोटोकलसहित सन्धीमा परिणत गरिने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा त्यही रुपमा पूरा हुन सकेन तर प्रोटोकल तयार गर्न कार्यतालिका नै तोकिएकाले यसमा प्रगती अवश्य भएको छ।
यसपाली बेइजिङमा सबैभन्दा धेरै माथापच्ची भएको विषय व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलका दुई वटा पक्ष छन्। एउटा, चीनको भूभाग हुँदै सामान नेपाल भित्र्याउने विषय। चिनियाँ पक्षको भनाइअनुसार यसरी कार्गो सिपमेन्टका लागि २०१६ को सम्झौता नै पर्याप्त छ। नेपालले यो यो ठाउँबाट यसरी कार्गो ल्याउँछौं भनेर चीनलाई जानकारी दिए पुग्छ।
अर्को, चीनको भूमीबाट नेपाली ट्रक नै आवतजावत गर्ने विषय। तेस्रो देशबाट सामान आयात गर्न नेपाली ट्रक चिनियाँ भूभाग हुँदै बन्दरगाहसम्म पुग्नुपर्छ। नेपाली ट्रक कुन कुन ठाउँ भएर जाने र कुन कुन बन्दरगाहसम्म पुग्ने भनेर प्रोटोकलमा तोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चीनका विभिन्न प्रान्तीय सरकारदेखि केन्द्रको रेल र सम्बन्धित अन्य विभागहरूसँग समन्वय गर्ने कार्य पूरा नभएकाले यसपाली प्रोटोकल सम्झौता संभव नभएको बताइएको छ।
तर चिनियाँ पक्षले व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललाई अगाडि बढाउन तयार रहेको नेपाली पक्षसँग दोहोर्याएको छ। प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिन नेपाल–चीनबीच केही चरण छलफल गर्ने सहमती भएको छ र, त्यस्तो एउटा बैठक अर्को महिनाका लागि तोकिएको छ।
बेइजिङमा यसपाली अन्य केही विषयमा पनि प्रगती भएको छ। दश बुँदे सम्झौताको ३ नम्बरमा उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ। उर्जा सहकार्यमा जलविद्युतमा चीनको लगानीदेखि उर्जा कारोबार समेत समेटिएकाले अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएपछि नेपालले चीनबाट विद्युत ल्याउन वा चीनलाई बिक्रि गर्न सक्नेछ।
दश बुँदे सम्झौतापत्रको ८ र ९ नम्बर बुँदामा नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न चीनले प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्ने र चीनमा नेपालीलाई तालिम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। भारतले समेत उद्योगमा चिनियाँ प्रविधि भित्र्याउन खोजिरहेको सन्दर्भमा नेपालको औद्योगिक विकासमा चीनको यो सहयोग महत्वपूर्ण सावित हुन सक्नेछ।
दुई वर्षअघि नाकाबन्दीको दबाबले सिर्जना गरेको एउटा परिस्थितिमा नेपाल–चीनबीच जुन सम्झौता–सहमती भएको थियो, अवश्य पनि यो भ्रमणमा ती सबै अगाडि बढेका छैनन्। तर दश बुँदे सम्झौतामा नपरेका कतिपय विषय १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएको छ। अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, नेपालमा ग्यास तथा तेलको खानी र भण्डारण स्थलको पहिचान गर्न चीनको सहयोगमा थप अध्ययन गर्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ।
नाकाबन्दीका बेला चीनले सांकेतिक रुपमा सिमित मात्रामा पेट्रोलियम अनुदान दिएपनि चीनबाट पेट्रोलियम कारोबार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्षअघि पनि त्यत्ति सकारात्मक थिएनन्। बेइजिङमा त्यसबेला नागरिक दैनिकका लागि अन्तर्वार्ता गर्दा उनले मसँग भनेका थिए, ‘चीनसँग आपतकालीन इन्धन सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन।’
भारतले नाकाबन्दी खुकुलो बनाइसकेको त्यो बेला ओलीले ‘संकट टर्दै गएकाले धेरै हतार छैन’ भन्दै व्यापार तथा पारवहन सम्झौताभित्र नै इन्धन पनि पर्न सक्ने संकेत गरेका थिए। नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थल पहिचान गर्न चीनले सहयोग गर्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा फेरि परेको छ र त्यसलाई चीनसँगको पेट्रोलियम कारोबारसँग जोडेर हेरिएको छ। छुट्टै सम्झौता नगरी यो विषय व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा समेट्न सकिने बुझाई दुबै पक्षमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ।
पहिले पहिले भन्दा यसपटक संयुक्त वक्तव्य तयार गर्ने क्रममा चिनियाँ पक्षले धेरै गृहकार्य गरेको र एक एक शब्दमा अडान लिएको नेपाली अधिकारीहरूको अनुभव छ। सामान्यतः पहिले नै अन्तिम मस्यौदा तयार हुने संयुक्त वक्तव्यमा यसपटक प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुगिसकेपछि पनि धेरै माथापच्ची भएको थियो।
एक जना नेपाली कुटनीतिक अधिकारी आफ्नो अनुभन सुनाउँदै भन्छन्, ‘संयुक्त वक्तव्य मस्यौदा गर्ने क्रममा चिनियाँहरू हामीसँग बारम्बार भन्थे– पूरा गर्न नसकिने कुरा नराखौं, पछि पूरा गर्न सकिएन भने लेखेको कुरा किन पूरा गरेनौ भनेर नेपाली र चिनियाँ जनताले सोध्नेछन्। त्यसैले जे कार्यान्वयन गर्न संभव हुन्छ ती विषय मात्रै संयुक्त वक्तव्यमा राखौं।’
गहिरो गृहकार्यपछि जुन जुन विषयमा सम्झौता गर्न र संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भयो, यो सहमती कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सबैभन्दा बलियो आधार त्यही नै हो।
बिपिनकी ‘श्रीमती’ बन्दै नम्रता
मेरो फिल्मले स्त्री यौन इच्छा उजागर गरेको छः स्वरा भास्कर
गोर्खा घोषणाबारे एक गोर्खाको दृष्टिकोण — सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान